Shan arrimood oo udub dhaxaad u ahaa go'aanka maxkamadda sare ee Kenya - BBC News Somali
Shan arrimood oo udub dhaxaad u ahaa go'aanka maxkamadda sare ee Kenya
Image caption Qaar ka mid ah xaakimiinta
Maxkamadda sare waxay baabi'isay dib u doorashadii madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Toddoba xaakim ayaa tiro aqlabiyad ah jimcihii ku go'aamiyey in guddiga doorashada uu ku guul darraystay inuu qabto doorashooyin waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka.
"Doorashooyinku ma aha dhacdo ee waa geeddi socod. Ka dib markii aan ka baaraan degnay caddaymaha oo dhan, waxaan ku qanacnay in doorashooyinka aan loo qaban si waafaqsan dastuurka iyo mabaadii'da lagu dabakhi karo" sidaa waxaa yiri xaakimka ugu sarreeya caddaaladda Kenya David Maraga, wuxuuna intaa ku daray in "madaxweyne Uhuru Kenyatta aan si sax ah loo soo dooran 8 Agoosto".
Soo koobidda diiwaan hayaha maxkamadda sare (maxkamadda sare waxay soo saartay amarro laakinse guddiga doorashada badankood wuu iska dhego tiray) ee ah in la eegay foomamka 34 A & B iyo kombiyuutarrada waaweyn ee guddiga doorashada.
1.ku dhawaad 3 meelood oo meel foomamka way khaldanaayeen. Qaar waxba laguma qorin, qaar isku far ayaa lagu saxiixay, qaar waxay ka yimaadeen xarumo doorasho oo aan si rasmi ah u jirin, qaar waxaa ka muuqday natiijooyin ka duwan wadarta, sidoo kalena ka duwan tan ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada, kumanaan ma lahayn tiimbareyaal, saxiixyo iyo calaamadaha khafiifka ah ee warqadaha ka dhex muuqda.
2.Shan malyan oo cod oo ku filan inay natiijada saamayn ku yeeshaan lama xaqiijin.
3.Baaritaanka qaabka lagu galo kombiyuutarrada guddiga doorashada, maxkamadda waxay u saartay koox soo ogaatay in tiro isticmaaleyaal ah oo aan loo fasixin ay hanaanka gudaha u galeen, ka hor iyo ka dib doorashada.
4.In guddoomiyaha guddiga doorashada uu galiyey, kana saaray foomamka 34A.
5.In hanaanka KIEMS ee $24 Malyan joogay ee loogu tala galay in loo isticmaalo in isla markiiba toos loogu soo diro 34A si ay dhinacyada oo dhan u hubiyaan, uu hallaabay dhamaanba xarumaha codaynta ee dalka oo dhan, sidaa darteedna tirooyinka loo soo diray Nairobi ay badidood yihiin kuwo aan nidaamkaas loo isticmaalin ee lagu soo diray farriin qoraaleedka telefoonka gacanta.